Lihoxisiwe icala likaManana lokushaya owesifazane | News24
Lihoxisiwe icala likaManana lokushaya owesifazane
Johannesburg - Selihoxisiwe icala lalowo owayeyiSekela likaNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme futhi osayilungu le-ANC ePhalamende, uMduduzi Manana.
UManana ubebhekene nezinsolo ezintsha zokuhlukumeza owesifazane, lokhu kungokusho kombiko wangaphambilini ngoMsombuluko weSowetanLive.
Leli phephandaba belibike ukuthi uManana usolwa ngokuzama ukudushela phansi umsizi wakhe wasendlini emasitebhisini emzini wkahe oyisithabathaba, eFourways, eGoli.
OLUNYE UDABA:BUKA: UManana enika amantombazane ama-pads
Lo wesifazane, igama lakhe nguChristine Wiro, udube umsebenzi ngeSonto ngemuva kwamasonto amathathu futhi wamuvulela icala lokushaya, ukuthuka inhlamba nokumesabisa esiteshini samaphoyisa aseDouglasdale.
UWiro, 43, odabuka eZimbabwe uthi uManana ubemdelela, emthuka ngamaphutha amancane abewenza waze wamusabisa nangokuthi uzomuphindisela kwelakubo eZimbabwe ngemuva kwezinsolo zokuthi wavulela umuntu okungasiye isango ezityshela ukuthi ngesinye sezivakashi.
Okhulumela amaphoyisa uMathapelo Peters uthe: "Icala lokushaya ebelivulwe esiteshini samaphoyisa aseDouglasdale ngeSonto ebusuku.
"Isisulu, nakuba kunja;, sabuya ngemuva kwamahora ambalwa salihoxisa icala. Njengamaphoyisa asinaso isiqiniseko sokuthi kungani isisulu sikhethe ukulesula icala. Ekugcineni isisulu yiso esinelungelo."